HomeWararka CiyaarahaJurgen Klopp oo ka warbixiyay dhaawacyada Joe Gomez, iyo Naby Keita
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ku rajo wayn in Joe Gomez iyo Naby Keita ay awoodi doonaan in ay ku soo laabtaan garoonka todobaadka soo socda.
Labada ciyaaryahan ayaa la tacaalayay dhaawacyo kubka iyo bowdada ah sida ay u kala horreeyaan, laakiin waxaa lagu sawiray iyagoo ku soo laabtay tababarka kooxda Reds ka dib guushii Arbacadii ay ka gaareen Everton.
Labada Xidig ayaa ku soo laabanaya Safarka Wolverhampton Wanderers laakiin Klopp ayaa ka dhawaajiyay in laga yaabo in labadan xidig ay ciyaaraan kulanka AC Milan bartamaha usbuuca.
Isagoo la hadlayay suxufiyiinta shirkiisa jaraa’id ee ka hor kulanka, Klopp ayaa yiri: “tabarka ayay ku soo laabteen Umaan ogolaanin inay si buuxda u ciyaaraan kulanka sababtoo ah qeybta caafimaadka ayaa noo sheegay inaanan sidaas sameynin. laakiin waxay u muuqdeen kuwo diyaar ah kulanka Ac Milan.
Gomez iyo Keita ay ku sii dhowaanaya soo laabashadooda kooxda, Liverpool waxay sii wadaysaa inay la tacaasho dhaawacyada muddada dheer Harvey Elliott , Roberto Firmino iyo Curtis Jones .